Blog-Tipping: अण्डा मार्केटिंग ब्लग | Martech Zone
Blog-Tipping: अण्डा मार्केटिंग ब्लग
मंगलवार, जुलाई 17, 2007 शनिबार, अक्टोबर 20, 2012 Douglas Karr
बेकरको दर्जन बनाउनको लागि अर्को छ, विडंबनाको कुरा, अण्डा मार्केटिंग ब्लग!
अण्डा मार्केटिंगको बारेमा: सुसान पेटन अण्डा मार्केटिंगको साझेदार हो। उनले सेन्ट्रल आर्कान्सा विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेकी छिन्, र अंग्रेजी र फ्रेन्चमा बीए डिग्री हासिल गरे। सुजनले रचनात्मक क्षमतामा लेखकको रूपमा १० बर्षसम्म काम गरे। उनी अब आफ्नो ज्ञान र मार्केटिंग, वित्त र व्यापार मा उनको अनुभव संग रचनात्मक क्षमता दोहन गरिरहेकी छिन।
यहाँ तपाईंको ब्लग सुझावहरू छन्:
मलाई सफा 'अखबार' मनपर्दछ तपाईको ब्लगमा! लेआउट अविश्वसनीय रूपमा सफा र प्रशस्त छ - धेरै राम्रो गरीएको! मलाई लाग्छ तपाईंको एनएभी बारमा एक अवसर छ आरएसएसको सदस्यता लिनुहोस् वा ईमेल लिंकमा। सायद तपाईको घर बायाँ-औचित्य गर्दै र लिंकहरूको बारेमा ... र त्यसपछि सदस्यता फाराम र आरएसएस प्रतिमा दायाँ-औचित्य गर्दै। यदि नेभ बारमा छैन भने, दायाँ-पट्टी यसको तल दायाँतिर भन्दा।
म RSS आइकन सिफारिस गर्दछु
धेरै जसो साइटहरू पृष्ठको माथि र दायाँ पट्टिमा रहेको छ 'पट्या aboveको माथि' ... जुन स्क्रोलि forको लागि आवश्यक छैन। यद्यपि अधिकांश ब्राउजरहरूले अब स्पष्ट रूपमा आरएसएस क्षमताहरू सामेल गर्दछन् - आरएसएस आइकनले सदस्यता लिन कार्यको लागि सूक्ष्म कल गर्दछ!
सान सेरिफ फन्टहरू पढ्नका लागि सेरिफ फन्टहरू जस्तो मैत्री छैन - तर तपाईं वेबमा लेखहरू पढ्न नियमित रूपमा सेरिफ फन्टहरू फेला पार्नुहुन्छ। मलाई पक्का छैन कि किन तर म ती दुवै प्रयोग गर्दिन। क्षतिपूर्ति दिन, यद्यपि, मँ निश्चित गर्दछु कि मेरो फन्ट आकारहरू पढ्न योग्य छन्। केही अवधिको लागि, हामीले वेबमा फन्ट आकारहरू सिकुञ्जेल देख्यौं जुन मोनिटरहरू ठूलो हुँदै जान्छन्।
अब मनिटरहरू धेरै उच्च रिजोलुसनहरूको साथ विशाल छन् - फन्टहरूलाई सानो बनाउन र पढ्न गाह्रो बनाउँदछ! हामी पूर्ण घेरामा आएका छौं। मँ तपाईको सामग्री को एक जोडी आकार को लागी फन्ट आकार को बढाउने सिफारिश गर्दछु। तपाई केवल आफ्नो सेन्टर फलकका लागि यो गर्न सक्नुहुनेछ फन्ट साइज: १ppx तपाईको स्टाईलसिटमा # कन्टेन्टमिल्डमा।
जब म यी सुझावहरू गर्दछु, म सधैं आफैं मेरो नियमहरू भ breaking्ग गरेको भेट्टाउँछु! जे होस्, म तपाईंको सामग्री भित्र हेडिings (h2 र / वा h3) को अधिक प्रयोगको सिफारिश गर्दछ साथै केही बुलेट सूचीहरू। इमानदारीपूर्वक, व्यक्तिहरूले वास्तवमा ब्लगहरू र वेबसाइटहरू उनीहरूलाई स्किम गर्ने रूपमा 'पढ्ने' गर्दैनन्। यसको लागि हामी चाहिन्छ भाग हाम्रो सामग्री। प्रत्येक ब्लगलाई कंकालको रूपमा सोच्नुहोस्। टाउको, शरीर, खुट्टा र खुट्टा को लागी एक शीर्षक जोड्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंको पसलहरूका लागि केही बुलेट पोइन्टहरू थप्नुहोस्। जब तपाईं आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं लेख स्किम गर्नुहुन्छ, तपाईं बुझ्न सक्नुहुनेछ कि समग्र पोष्टले के भन्न खोजिरहेको छ वास्तवमा प्रत्येक शब्द पढे बिना।
हेडिingsहरू र बुलेटहरूको साथ - तपाईंको पोष्टहरू फरक पार्न छविहरू प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्। यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ जब तपाईंको पाठकहरूले फिड रिडरबाट तपाईंको पोष्टहरू पढ्दैछन् जहाँ तपाईंको ब्लगका सबै सौंदर्यशास्त्रहरू छन्
फिल्टर गरिएको। एक चित्र हजार पाठकहरूको लायक छ! म वाचा गर्छु। तपाईं छवि बिना मेरा धेरै थोरै पाउनुहुनेछ र मैले मेरो फिडबाट मेरो पोष्टहरूमा क्लिक-थ्रूमा तत्काल र लगातार बूस्ट पाउनुभयो।
के तपाइँ तपाइँको ब्लग को लागी तपाइँको साइट को ब्रान्डिंग को बारे मा सोच्नुभएको छ वा उल्टो? मलाई लाग्दैन कि यसले तपाईंको लोगोलाई तपाईंको ब्ल्गमा सार्न धेरै लिन्छ वा तपाईंको ब्लगलाई तपाईंको वेब साइटमा केन्द्र-टुक्राको रूपमा प्रयोग गर्न। आजकलको प्रवृत्तिले दुई मर्ज गर्दै छ ... ब्लगहरू अधिक साइटहरू जस्तै छन् र साइटहरूले ब्ल्गिंग प्रविधिको अधिक प्रयोग गरिरहेका छन्। मसँग केही समयको लागि वेबसाइट थियो, कल भयो Coders4 भाडामा। मैले केहि पोष्ट पछि फेला पारे कि मेरो ब्लगको साथ मेरो साइटको भन्दा मेरो व्यवसाय बढि छिटो बढ्दै छ! तपाईं उही पाउन सक्नुहुन्छ।
कम से कम, तपाइँको साइडबारमा तपाइँको पुस्तकमा लिंक पोष्ट गर्न निश्चित गर्नुहोस्! तिम्रो किताब, १०१ उद्यमी सल्लाहहरू, तपाईं अधिकार निर्माण गर्न जारी रूपमा तपाईंको ब्लगको आवाजमा धेरै विश्वसनीयता ल्याउँदछ! साथै, यसले तपाईंको बिक्री बढावा दिनेछ किनकि तपाईंको ब्लग विश्वसनीयतामा बढ्छ।
यसले त्यो स्तम्भमा सेतो खाली ठाउँ पनि लिनेछ। मँ यसमा तपाईंलाई पिंग गर्दै छैन - मलाई लाग्छ तपाईं सम्भवत थिममा काम गर्दै हुनुहुन्छ!
मैले तपाईको हेडरमा नक्कल मेटा ट्यागहरू देखें - तर कुञ्जी शब्द खाली छन्। म एक जोडी सिफारिश गर्दछु मेटा ट्याग प्लगइनहरू जुन मैले अघिल्लो पोष्टमा लेखेको थिएँ।
यसले तपाइँलाई केही समयको लागि व्यस्त राख्नु पर्छ! मलाई जानकारी दिनुहोस् तपाईंको ब्लगले केहि परिवर्तनहरू लागू गरिसकेपछि गरिरहेको छ। धैर्यवान हुनुहोस्! ब्लगिंग मा सफलता को बारे मा छ सामग्री, जोश र गति!। कृपया या त अपरिचित नहुनुहोस् - हामी यो सुन्न चाहन्छौं कि यसले कसरी प्रगति गरिरहेको छ!
कसरी तपाईंको ब्लग टिप हुने
यदि तपाईं आफ्नो ब्लग चाहानुहुन्छ टिपिएको, केवल दिशा निर्देशनहरूको अनुसरण गर्नुहोस् मेरो ब्लग टिपिंग पोष्ट.
टैग: ब्लग सुझावहरूअन्डा मार्केटिंग ब्लग
घरमा धेरै धेरै घण्टा काम गर्दै? रोक्नको लागि सजिलो तरीका ...
कर्पोरेट ब्लगि:: कम्पनीहरूबाट शीर्ष १० प्रश्नहरू